सुध्रिएन चाबहिल–साँखु सडकखण्ड,बर्षाको पानि र हिलोमा रोमल्लीदै हिड्नु पर्ने कस्तो बाध्यता ? - Gokarna News from Nepal
सुध्रिएन चाबहिल–साँखु सडकखण्ड,बर्षाको पानि र हिलोमा रोमल्लीदै हिड्नु पर्ने कस्तो बाध्यता ?
बुधबार, असार २५, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य केन्द्रको रूपमा परिचित चाबहिलबाट साँखु हुँदै जहरसिंपौवा पुग्ने सडकको अवस्था निकै दयनीय छ ।
पानी पर्दा हिलो हुने, सडकमा जमेको पानी र पानी नपर्दा आउने धुलोले यस सडकखण्डमा आवतजावत गर्ने यात्रु र स्थानीयबासिन्दाले निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।
दिनहुँ सोही सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणको समस्याको भने अझ कष्टकर भएको छ । सडकको हिलो पानी र पैदलसम्म हिड्न नसक्ने गरी जमेको पानीले हैरानीमा पर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
बौद्धकी बिनिता कोइराला भन्छिन्, “सडकमा खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे भएपछि सजिलै सडक वारपार गर्न सक्ने अवस्था छैन । सडकमा बिच्छ्याएको गिट्टी छरपष्ट छन् कतिपय गाडी त बीच सडकका खाल्डामै रोकिन्छन् भने दिनहुँ मोटरसाइकल चिप्लिएर पल्टिने गरेका छन् । यो सडकखण्डका यस्ता घटना दिनचर्या बन्ने गरेका छन् ।
पछि सर्वोच्च अदालतले सडकमा जग्गा पर्नेलाई मुआब्जा दिनुपर्ने आदेश दिएपछि मुआब्जाको प्रक्रियामा जानुपर्दा सडक निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।